Ekoatera: #LoxaEsMas, Tolo-kevitra Mitondra Fiovàna · Global Voices teny Malagasy
Ekoatera: #LoxaEsMas, Tolo-kevitra Mitondra Fiovàna
Voadika ny 05 Jolay 2012 3:06 GMT
Ny rohy rehetra dia mitondra mankany amin'ny tranonkala miteny Espaniola raha tsy misy toro-marika manokana
#LoxaEsMas (“Ambony kokoa i Loja”) dia hetsika iray izay mety hamorona làlana vaovao hitaterana ny olana any Loja, Ekoatera amin'ny fampiasana ny teknolojia ho toy ny fitaovana fototra. Io hetsika io ihany koa no mandrisika amin'ny fikaroham-bahaolana tsotra ho fanatsarana ny tanàna.
Loja [en] dia tanàna ao atsinanan'ny faritanin'i Loja [en], atsimon'i Ekoatera. Izy no renivohitry ny fileovana sy ny faritanin'i Loja. Miaraka amin'ny mponina eo ho eo amin'ny 200.000 dia malaza amin'ny asa-tànana ny tanàna, noho izany, fantatra ihany koa amin'ny hoe : “renivohitry ny Kolontsaina sy Zavakanton'i Ekoatora” izy.
# LoxaEsMas dia noforonina noho ny fahatsapan'ny vahoaka ny tsy fahafahan'ny manampahefana hitondra fanavaozana ao Loja. Ankoatra izay dia fikambanana iray tsy misy rafitra ambaratonga izy ity. Noho izany, izay rehetra te-handray anjara amin'ny fanatanteraha io hetsika io dia afaka mandray anjara avokoa.
Ao amin'ny bilaoginy manokana, Carlos Correa, izay tompon'ity hevitra ity dia manamafy :
Ya venía sintiendo dolor por ver a la ciudad retroceder en muchos aspectos. A inicios de este año escribí un post “Piensa Loxa, piensa!” que tuvo un eco moderado en la web, quizá era necesario juntar las chispas aisladas hasta formar una fogata, entonces fue cuando vi en las Redes Sociales una herramienta para ello, para darle un uso más coherente y adecuado al Facebook o a Twitter que simplemente subir las fotos del gatito o de las cervezas de la noche anterior.
Nanohina ahy ny nahita ny fihemoran'ny tanàna amin'ny sehatra maro. Tamin'ny fiandohan'ity taona ity, nanoratra lahatsoratra iray aho : Piensa, Loxa, piensa! (saino, Loja, saino), dia nisy valiny tsotra avy amin'ny mpamaky : angamba ilaina ny fiaraha-mitondra ny singa rehetra hanaovana piozila lehibe iray. Tamin'izay fotoana izay, tsapako fa ny tambajotra sosialy dia fitaovam-piadiana matanjaka hahatratrarana io, ny fampiasana ny Facebook sy Twitter araka ny tokony ho izy dia zavatra hafa noho ny fampakarana sarin-tsaka kely na ny labiera nosotrointsika halina.
Miaraka amin'ny teny faneva “Mijirika Demokrasia”, ity vondrona misokatra amin'ny manodidina ity dia mihevitra ny hampiroborobo ny fandraisan'ny mponina anjara amin'ny fitadiavana vahaolana. Izy ity dia te-hametraka fa ny foto-kevitry ny demokrasia dia tsy amin'ny alalan'ny fifidianana isaky ny efa-taona fotsiny ihany fa amin'ny fandraisana anjara mavitrika sy an-tsitrapo koa.
Taona maro lasa izay, tena sarotra ny mampihatra ny hevitra iray ho azo tanterahina, ny mamory vahoaka, ny manao dokam-barotra. Kanefa, amin'izao fotoana izao, noho ny fisian'ny aterineto, dia azo atao haingana no sady tsy mandany fotoana ny zavatra rehetra.
Io vondrona io dia mikendry ny hampiroborobo fanaovana hetsika iray samihafa isam-bolana, noho izany, tsy amin'ny tambajotra sosialy sy aterineto ihany fa amin'ireo izay olona tsy mampiasa io teknolojia io ihany koa.
Ny hetsika voalohan'ny LoxaEsMas dia ny “Twit Callejero” (“Tweet eny an-dàlam-be”), “ Ahoana no hitantaranao an'i Loja amin'ny litera 140 ?” Io hevitra io dia eritreretina fa hampiely ny feon'ny vahoaka amin'ny fampiasany ny tweet-ny miaraka amin'ny soso-keviny mba hanatsarana an'i Loja.
Hisy fomba fifidianana iray ao amin'ny tranonkalan'i LoxaEsMas izay hahitàna ny fanehoan-kevitra avy amin'ny tweet rehetra. Ny mpampiasa twitter dia afaka mifidy tweet dimy tsara indrindra amin'ny fanindriany ny bokotra “Tiako”. Ny 29 Jona, fetra farany hanaovana ny fifidianana, ireo tweets tsara indrindra izay voafidy dia havoaka an-taratasy sy haparitaka eran'ny tanàna. Ankoatra izay, hisy fivoriana karakaraina miaraka amin'ny ben'ny tanàn'i Loja, Jorge Bailon, mba hampisehoana ny tweet rehetra nandray anjara.
Ireto ary ny sasantsasany amin'ireo tweets nandray anjara hatramin'izao :
Pablo Andrés Duque (@pabloaduquec) dia miteny amin'ny mponina ao Loja :
Aza matahotra ny mangataka amin'ny manampahefana ao aminareo (ben'ny tanàna, mpanolotsainan'ny tanàna) hanao izay tokony hataony : ASA. #LoxaEsMás
Cesar Jaramillo (@cesarvolter) dia manoratra hoe :
#LoxaEsMás cuando veo la mirada de mis hijos y quiero a travez [sic] del tiempo ver en sus ojos una ciudad digna y sobre todo Feliz
#LoxaEsMás Raha mijery ireo mason-janako aho dia tanàna iray mendrika sy sambatra no tiako ho hita ao amin'izy ireo.
Gianella Carrion (@GianeCarrionS) dia mahalala ny hatsaran'i Loja ary miantso ny olona hifantoka amin'io lohahevitra io
#LoxaEsMás ciudad cultural, riqueza de nuestro Ecuador, es hora de ponernos la camiseta y luchar por nuestra querida Loja.
#LoxaEsMás dia tanàna ara-kolontsaina, harena sarobidin'i Ekoaterantsika, fotoana izao hitafiantsika ny akanjon'ny ekipantsika ary hiadiantsika ho an'i Loja malalantsika.
Ho fampahafantarana bebe kokoa ity hetsika ity sy ireo tweets tahaka itony dia azo jerena ny tranonkalan'i Twit Callejero, Azo arahana ao amin'ny Twitter (@loxaesmas) ihany koa izany.